Ukhuthaza abesifazane ukuba banganciki kubantu besilisa - Ilanga News
Home Izindaba Ukhuthaza abesifazane ukuba banganciki kubantu besilisa
Ukhuthaza abesifazane ukuba banganciki kubantu besilisa
Uthi ziningi izindlela zokuxosha ikati eziko
UNKZ Thandazile Mthombeni ukhuthaza abesifazane ukungahlali ebudlelwaneni abahlukumezekayo kubona ngoba
bencenge ukondliwa. Ubagqugquzela ukusungula noma yiluphi uhlobo lwamabhizinisi azobasiza bakwazi ukulala
bedlile nemindeni yabo.
UKHUTHAZA abantu abahleli emakhaya ukuba bangakhethi uhlobo lomsebenzi noma lwebhizinisi uma befisa ukuya phambili empilweni owesifazane wase-Adams Mission, eningizimu yeTheku, owakhe umuzi, wathenga imoto, wakhulisa, wafundisa izingane ngemali ayenza ngokuthengisa ummbila emgwaqweni.
UNkz Thandazile Mthombeni (53), uthi lo msebenzi wokudayisa ummbila yifa alishiyelwa ngunina. Ngokusho kwakhe, uyafisa nezingane zakhe zingawushalazeli.
“Sisakhula, besithi uma sibuya esikoleni, sifike ekhaya ummbila usugcwele amabhakede, bese siyawathwala, sihambe siyodayisa emizini yabantu. Ngikhule kuyimpilo yethu nje leyo futhi kuyindlela ebesilekelela ngayo umama njengoba besikhula ubaba engekho.
“Imali ebesibuya nayo, besikwazi ukuphila ngayo, okuyilapho ngiqale khona ukulibuka ngamanye amehlo leli bhizinisi,” kusho yena.
Uthi ngisho esebona ukuthi isimo siba nzima ekhaya, kumele alekelele unina, ubone kuyilona leli bhizinisi azokwazi ukulekelela ngalo.
“Ngiqale ukuyodayisa ngokugcwele edolobheni laseManzimtoti. Ngidayisele khona iminyaka eminingi, ngaze ngayeka emuva kokuvulwa kwenxanxathela yezitolo, iGalleria ngoba abantu bese bebancane khona,” kusho yena.
Uthi ubone ukuthi okungenani makathole indawo azodayisela kuyona umbila ngakwakhe. “Kuyimanje nje ngimatasa ngilungiselela umshado ozokwenzeka ungakapheli lo nyaka njengoba mina noMnu Mthokozisi Njapha sisemalungiselweni okushada.
“Konke lokhu sizokwenza ngemali esiyithola kuleli bhizinisi, naye sengize ngamfaka kulona njengoba kunenye indawo adayisela kuyona,” kusho yena.
Uthi uhlangane noMnu Njapha engasebenzi, bathandana, okuthe emuva kwesikhathi, wamfundisa leli bhizinisi athi ulenza ngokukhulu ukuthembeka.
“Kuyena ngithande ukuthi akakuthwele ekhanda ukuthi ungumuntu wesilisa, enjalo nje, ukhuthele ngendlela eyisimanga.
“Kuningi esesifundisene khona ukukhulisa ibhizinisi. Ngingasho nje ukuthi naye eyakhe impilo isishintshile emuva kokungena kuleli bhizinisi,” kusho yena.
Uthi yize abantwana bakhe abathathu bengazalwa nguMnu Njapha, kodwa ufana noyise kubona.
“Ngiyaye ngiphatheke kabi uma ngibona abesifazane behleli ebudlelwaneni nabesilisa ababahlukumezayo ngoba bethi benzela ukondliwa.
“Kuningi kabi esingakwenza, maningi amabhizinisi amancane abantu abangawenza abaningi abawabukela phansi kunokulindela ukondliwa ngamadoda abahlukumezayo,” kusho uNkz Mthombeni.
Uthi bangadayisa izitshalo nezithelo okuyinto ethengwa nsuku zonke.
“Kawukho umuzi ongawudli utamatisi, iklabishi namazambane. Kakudingi ukuba uze uzitshalele khona, ungathenga ezimakethe, ukukale bese uhamba ungena emizini yabantu udayisa, ngeke nje ulale ungadlile.
“Kwawona ummbila, abaningi ngihlale ngibagqugquzela ukuthi mabawudayise ngoba uma usujwayele, konke kuyenzeka,” kusho yena.
Uthi ngosuku usebenzisa u-R500 ethenga ummbila oluhlaza bese ekhokhela nemoto emdilivelayo yena enze inzunzo engaphezulu kuka-R600.
Ngemali athi uyayenza ngosuku, uphilisa umndeni wakhe, enze ngayo nezinye izinto eziqhubela impilo yakhe phambili.
“Senginabantwana abasebenzayo, engibafundise ngale mali. Omunye wabo ungunogada, nakhona wakhokhelwa yimina, wafu-nda futhi uwusizo olukhulu kakhulu kimina,” kusho yena. Njengamanje udayisela emgwaqweni omkhulu khona e-Adams.
Uncoma osomatekisi bakhona athi bayameseka ngendlela eyisimanga.
“Ngabe ngiqamba amanga uma ngithi kangesekwa ngoba ngisho omakhelwane bayazithumela izingane zizothenga ummbila ophekiwe noma owosiwe. Uma kunombila engigoduke nawo, yingoba usuke ungekho esimeni sokuthi ungadayiseka.
“Ngiyafisa ukuthi nakubantwana bami kube khona olithathayo leli bhizinisi ngoba liyifa ngokubona kwami,” kusho yena.
Zonke izinsuku uthi uvuka ngo-03:30 aye emapulazini lapho ethenga khona ummbila, bese ngo-12:00 emini eyodayisa.
Previous articleOweBafana nesilonda sokuya phesheya
Next articleKuhlehliselwe uLwesine ukuvulwa kwezikole